November 2017 – Page2– Trend.com.mm
ကိုယ်အရမ်းအကြိုက်တွေ့တဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုးကြည့်ပြီးရင် ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ကား ထဲရိုက်သွားသလို ခံစားရဖူးလား? ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးတွေ ဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့လဲဆိုတာလည်း သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေကြည့်ရတာလည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, MoviesLeaveaComment on ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့နောက်ကွယ် ရိုက်ကွင်းဓာတ်ပုံများ
နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Rainဟာ မကြာခင်မီနီအယ်လ်ဘမ်အသစ်တစ်ခုကိုပရိသတ်တွေဆီမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ မီနီအယ်လ်ဘမ်မှာပါဝင်မယ့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ် လို့ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ ပိုစတာတစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။”Gang”ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီး မီနီအယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ My » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဒီဇင်ဘာလမှာ ပရိသတ်တွေအတွက်မီနီအယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြန့်ချီပေးတော့မယ့် Rain
Posted on November 27, 2017 by Wint
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျရှုံးသွားတဲ့ တပ်သားတွေကိုလွမ်းဆွတ် ခြင်းအထိမ်းအမှတ်(သို့) အမှတ်တရပွဲကို နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ ၁၁နာရီ ၁၁မိနစ်ဆိုကျင်းပပြီး အမေရိကန်စစ်တပ်ကျောက်တိုင် (၅)ခုကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Culture, People & PlanetLeaveaComment on တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ နိုဝင်ဘာ(၁၁)ရက်နေ့ ၁၁နာရီ ၁၁မိနစ်ဆိုကျင်းပတဲ့ အမှတ်တရပွဲ
Posted on November 27, 2017 by Noel
မိန်းကလေးတိုင်းဝက်ခြံထွက်တာကိုအရမ်းမုန်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝက်ခြံက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့လုံးဝမထွက်အောင်မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ အခုပြောပြမယ့်အချက်လေးတွေအတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ ၀က်ခြံထွက်ရင်လည်းခဏလေးနဲ့ပြန်ပျောက်သွားစေမှာပါ။ (၁) ရေများများသောက်ပါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်များများရှိမှ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီး အင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းတွေကလည်းသူ့အလုပ်သူပုံမှန်လုပ်နိုင်မှာပါ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ၀က်ခြံမထွက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမလဲ?
ကလေးတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်ထိ ဖုန်းသုံးခွင့်မပေးတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ
Posted on November 27, 2017 November 27, 2017 by Wint
ဒီလူတွေဟာ အိုင်တီနည်းပညာရဲ့အဓိကလူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့လိုအပ် သလောက် ဘယ်လိုစက်ပစ္စည်းမဆိုဝယ်ယူနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကလေးတွေက စက်ပစ္စည်းတွေသုံးနေချိန် သူတို့ကလေးတွေမှာ စက်ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲခွင့်မရှိတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမြဲတမ်းမကျေမနပ်ပြော » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ကလေးတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်ထိ ဖုန်းသုံးခွင့်မပေးတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ
စစ်မှုထမ်း ပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့နေ့လည်စာအတူစားခဲ့တဲ့ Taecyeon
2PM အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Taecyeon က သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Jun.K နဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့တုန်းကနေ့လည်စာအတူစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on စစ်မှုထမ်း ပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့နေ့လည်စာအတူစားခဲ့တဲ့ Taecyeon
အင်တာနက်မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေ
Posted on November 24, 2017 by Wint
ကြည့်ရတာ တစ်ချို့လူတွေက ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ရသတစ်ခုတစ်စုံပေးရမှ ကျေနပ်သူတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ပုံသေကိုယ့်ရဲ့ပုံကို ရိုးရိုးကြီးရိုက်တာ ထက် လူတွေစိတ်ဝင်စားလောက်မယ့်ပုံစံမျိုးကို ဖန်တီးပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on အင်တာနက်မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေ
Posted on November 24, 2017 April 10, 2019 by Wint
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ အရမ်းပျင်းတဲ့ ကိုလူပျင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲ အစားအသောက်တွေ အလွယ်တကူရဖို့ကိုသာ သူတွေးနေတတ်တယ်။ တစ်မနက် ရွာထဲမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ”ကိုလူပျင်းနဲ့ ခြေနှစ်ဖက်ပြတ် ဝံပုလွေ” ပုံပြင်ကပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာ
၀ိတ်ချဖို့စပြီဆိုတာနဲ့သင်က အစားလည်းရှောင်မယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ဘာမှမထူးခြားပဲကိုယ်အလေးချိန်က မကျသေးဘူးဆိုရင်ဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၁)ပရိုတင်းဓာတ်မလုံလောက်လို့ သင်က၀ိတ်လျှော့မယ်ဆိုပြီးကြက်သား၊တို့ဖူးစတဲ့အသားတွေကိုရှောင်နေပါသလား? အဲ့ဒါကသင်ကိုယ်အလေးချိန်မကျရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ၀ိတ်ချနေပေမဲ့ အချိန်ကြာတဲ့အထိကိုယ်အလေးချိန်မကျသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ?
နာမည်ကျော်အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Suzy က သူမရဲ့ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ် အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပြည်ပမီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့်သိရပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ သူမရဲ့ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်အတွက်သီချင်းသစ်တွေကိုရွေးချယ်နေတယ်လို့ ရင်းနှီးသူတွေ ကပြောခဲ့ကြပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဇန်န၀ါရီမှာ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်နဲ့ပြန်လာမယ့် Suzy